८ मिनेटको दृश्यका लागि ७० करोड खर्च ! - Nepal Insider
Home/समाचार/८ मिनेटको दृश्यका लागि ७० करोड खर्च !
एजेन्सी– बाहुबली फिल्मका स्टार प्रभास र बलिउड नायिका श्रद्धा कपूर एउटै फिल्ममा देखिंदैछन् । भारतीय फिल्म ‘साहू’ मा यो जोडीको एकसाथ देखिँदैछन् ।
हिन्दी, तेलुगु र तामिल तीन भाषामा निर्माण भइरहेको यो चलचित्र एउटा खबरले अहिले चलचित्र बजार तरंगित बनेको छ । प्रभासको फिल्म भनेर यसअघि नै चर्चा बटुलेको यो फिल्ममा छायाँकार आर माधीले उक्त खबर चुहाएको बताइन्छ ।
माधीका अनुसार फिल्ममा ८ मिनेटको दृश्यको लागि ७० करोड भारु खर्च गरिएको छ । अबुधाबीमा छायाँकन गरिएको उक्त एक्शन दृश्यले सबैभन्दा खर्चिलो दृश्यको कीर्तिमान नै राख्ने खबर चलेको छ । फिल्ममा प्रभासको भूमिका विभिन्न प्रकारको रहेको थाहा भएको छ । श्रद्धाको भने फिल्ममा प्रहरीको भुमिकामा छिन् ।
प्रभासको फिल्म एक्शन हुने पक्का रहेपनि सानो दृश्यको यति ठूलो रकम खर्चेको खबरसँगै फिल्मको चर्चा थप चुलिएको छ । फिल्ममा प्रभास र श्रद्धा बाहेक ज्याकी श्रफ, निल नीतिन मुकेश, मन्दीरा बेदी, चंकी पाण्डे, महेश मान्ज्रेकर, अरुण विजय, मुरली शर्मा लगायतका स्टारहरु रहेका छन् ।
अञ्जली अधिकारीको अभिनयमा फेरि आयो मार्मिक गित ( भिडियो सहित)
बच्चा जन्माएर झाडीमा फाल्ने आमाबारे डरलाग्दो खुलाशा, बास्तबिकता यहि हो त ? (भिडियो सहित)